Waftigii Golaha Sare ee Jwxo, Socdaalkana ku Marayey Maraykanka oo ay ka Muuqato Awood – Rasaasa News
Waftigii Golaha Sare ee Jwxo, Socdaalkana ku Marayey Maraykanka oo ay ka Muuqato Awood
Jun 13, 2009 Jwxo, Jwxo-shiil, ONLF, xoriyad
Wariyaashu waa dadka ugu horeeya ee fahma ama akhrista dareen jirka iyo ficilada qarsoon ee ay sameeyaan Masuuliyiintu marka ay horyimaadaan dadweynaha, Masuuliyiinta qaarba waxbaa lagu gartaa in kasta oo ay jiraan qaar aan waligood la fahmi karin, hadan dadka ay masuuliyada rabaaniga ahi ka maqan tahay waxaa aad u sahlan in markiiba la fahmo waxa ay dareemayaan.
Waayo aragnimadu waxay boqolaal goor ka muhiimsan tahay tacliinta ugu saraysa, waayo aragnimadana waxaa ka sii muhiimsan samayta rabaaniga ah ee Eebahay uu siiyo dadkiisa. Sharaxayga Dimoqraatiyada ka Islaam ahaan, waa dhaqmaadka Islaamka saxda ah, taas oo ah waayo aragnimo iyo caqaliyo la uruuriyey.
Golaha Sare ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], oo aad moodo in uu ka muuqdo, dabo socdana dhaqan Dimoqraatiyadeed oo ah kii lagu abuuray Jwxo August 15, 2004, waxaa ka muuqatay go,aamadiisa hab dhaqankiisa dhaqanka Dimoqraatiyada oo ay haatan isticmaalaan dalalka ay nabadu hooyga u tahay.
Golaha sare Jwxo oo in badan isku dayey in uu ummada Somalida Ogadeeniya ka dhaadhiciyo dhibaatooyinka uu lugta la sii galayo ururkii masuulka ka ahaa xornimo u raadinta ummada Somalida Ogadeeniya ee Jwxo. Waxaana muddo dheer qaadatay in laga dhaadhiciyo ummada dhibaatooyinka ku soo fool leh halgankooda, waxaana ugu dambayntii ku habsatay ururka dhibaatadii laga digayey, iyada oo waliba si xun oo aan la filaynin u dhex fadhiistaya, dhibaatadaas waxaana ay Jwxo ku dhaqaaqday arimahan;
1. waxaa xabada isku jeediyey N/hurayaalkii halganka ku walaalaha ahaa
2. Waxaa dhimashadooda isku farxay Masuuliyiintii halganka Saldhiga u ahaa ee ay haweenka kaliya uun u kala duwanaayeen.
3. Waxaa xabad lagala hor yimid urur kasta oo damacsanaa in uu Itobiya Xabad ku rido
4. Waxaa soo baxday qabiil qaawan oo Ilkihiisi banaanka soo dhigtay iyo soo if bax cuqdad ay ummada ugu dambaysay dagaalkii Cali iyo Haruun
5. Siyaasad xumadii Jwxo waxay dhibaato kale ka abuurtay Koonfurta Somaliya
Xumaanahaasi kolkii ay faraha la galeen masuuliyiintii Jwxo, ayaa waxaa ummada soo wajahaday niyada Jab aan soo marin 23 sano ee ugu dambaysay, ka dib kolkii ay heshiiskii kala saxiixdeen Maxamed Siyaad Bare iyo Xukuumadii Mingiste Xayle Maryan, oo gondo gooyo ku noqotay halgankii ay waday JXSG.
Sidaasi si la mid ah ayaa waxaa maanta gondo gooyo ku noqotay ummada Somalida Ogadeeniya arimaha ay ku dhaqaaqeen masuuliyiin ka tirsanaa ururka JWXO oo uu ugu horeeyo Jwxo-shiil, kolkii uu hal mar kaliya ku dhaqaaqay arimaha kor ku qoran, waxaana hal mar la waayey;
1. Ciidamadii xooga u tababaraa ee ay lahayd Jwxo, ayaa hal mar waxaa ay baneeyeen fadhiisimadoodii gudaha Ogadeeniya.
2. Ciidankii JWXO waxay iska xaadiriyeen Dalalka dariska iyaga oo aad uga niyad xun sida ay wax u dhaceen.
3. Qaar ka mid ah Ciidamadii Jwxo waxaa qirtay cadowga Itobiya in ay isa soo dhiibeen
Guul daro aad u wayn ayaa ummada Somalida Ogadeeniya u soo hoyatay, waxaa cidhiidhi galay halgankii ay qaaraanka ku waday ummadu, waxay ka shalaytoonayaan halka xun ee uu ku dambeeyey. Dadku umma sina xumaanta, masuuliyiintuna waa sidaasi si la mid ahaa, waxaase meel ugu qoran dadweynaha Somalida Ogadeeniya oo ay taariikh xumo ku xusuusan doonaan xubno uu ugu horeeyo Mr. Jwxo-shiil.
Hadaba, intii ay dhacayeen xasaradahaasi iyo intii ayna xooga u bilaabaninba waxaa iyagu qaylo dheer kula dhex jiray ummada Somalida Ogadeeniya Xubno ay kolkaas shacabku u arkayeen in ay fiicnaan lahayd in ay iska aamusaan, maantase ay dadeynuhu lee yihiin hadii aan raaci lahayn waxan maanta dhacay marna ma dhaceen, Ilaah baase qadaray.
Xubnahaas golaha sare oo kuwoodii ugu muhiimsanaa ay ku baxeen gacanta Jwxo-shiilada, sababta ay godka ugu rideen ay ahayd yaan la idiinka dambaynin masuuliyada Jwxo iyo iyaga oo ka soo horjeeda wanaaga halganka. Xubnaha golaha sare ma ayna ku niyad jabin dhibaatooyinka loo gaystay halganka iyo N/hurayaalka ee waxay halkii ka sii wadeen, halganka iyo dib u abaabulka ummada la niyad jabiyey.
Waxaana soo muuqanaysa in ay ku guulaysanayaan Golaha Sare ee Jwxo, dib u soo noolaynta niyada ummada Somalida Ogadeeniya iyo toosinta halganka qaloocday, waxaana u suurto gashay in ay kasbadaan Jaaliyadaha dibada iyo kuwa gudahaba, waxaa kale oo ay ku guulaysteen in ay dumaan xooggag ka caafimaad qaba dhibaatooyinkii uu Jwxo-shiil ka dhex abuuray ummada Somalida Ogadeeniya iyo N/hurayaalka halganka kula jira gumaysiga Itobiya.
Hadaba, in kasta oo uu golaha Sare ee Jwxo ay muuqato in uu boodhka ka jafayo niyada daxalaysatay ee Ummada Somalida Ogadeeniya, hadana waxaa muhiim ah in aan la qarin karin in ay ka dhex muuqato kala dambayn la,aan xubnaha golaha sare ee Jwxo. Kala dambayn la,aantan oo ay ogaan karaan dad yari, ayaan ahayn mid aad u wayn, balse waxaa keenaysa ayaan is lee yahay awaayo aragnimo la,aanta xubnaha ururka oo aan hor masuuliyad balaadhan u qabanin amaba aan qabaninba. Waxayna aad isugu mashquulinayaan in ay muuqdaan goor kasta oo ayna waxba u quudhaynin xubnaha kale ee ay wada shaqaynta lee yihiin.
Waxaa muuqata in golaha sare ee Jwxo ay gacantooda soo gashay hogaamintii ururka ONLF, waxaa kale oo aan muuqan in ay si dhakhso ah ugu soo biiran masuuliyiintii hore ula shaqayn jiray ururka ONLF, oo iyagu isu arkaya dad laga guulaystay. Waxayna arintu noqon doontaa in muddo golaha sare ee ururka ONLF uu la liic liico masuuliyada haatan soo wajahday.
Isku soo duub oo, waxaa kaliya oo gumaysiga Itobiya laggaga guulaysan karaa xoriyadna lagu gaadhi karaa, in arinta halganka Somalida Ogadeeniya ay noqoto sida ciyaarta Qori isu dhiibka oo kale, ee ayna noqonin, “anigu Qombahaygii lig liga ayaan haysataa” [Cabdi Xandule, oo noolaa qarnigii 20aad].
Nin Lagu Seexdow ha Seexan, Sax Baad Diidaye ha Seexan
Jwxo-shiil oo Lagu Arkay Isaga oo Geel la Jooga Aaga Degmada Aware